काला-पानी नजीकै सश-स्त्र प्रहरी बल नेपालको बि.ओ.पी. स्थापना हुने !!!पुरा पढ्नुहोस ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/काला-पानी नजीकै सश-स्त्र प्रहरी बल नेपालको बि.ओ.पी. स्थापना हुने !!!पुरा पढ्नुहोस !
काला-पानी नजीकै सश-स्त्र प्रहरी बल नेपालको बि.ओ.पी. स्थापना हुने !!!पुरा पढ्नुहोस !
दार्चुलाको व्यास गाउँ`पालिकाको काला`पानी क्षेत्र नजीकै सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बि`ओ`पी) तत्काल स्थापना हुने भएको छ । गत म`ङ्सिरमै नेपाल सरकारले बि`ओ`पी राख्ने निर्णय गरेको भए पनि लक`डाउनका कारण ढिलाइ भएको थियो । भारतले यही शुक्रबार नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनसँग सीमा जोड्ने गरी सडक निर्माण गरेपछि सरकारले अहिले तत्काल व्यासको छा`ङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरीको बि`ओ`पी रा`ख्ने भएको हो ।
बुधबार व्यासको छा`ङ्गरुमा बि`ओ`पी स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सश`स्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५० का सश`स्त्र प्रहरी नायब उप`रीक्षक डम्मरबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । “गागामा सश`स्त्र प्रहरी पठाएर बि.ओ.पी. राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बुधबार सम्म हेलिक`प्टर मार्फत बन्दो बस्तीको साम`ग्री सहित सश`स्त्र प्र`हरी पठा`उने तयारी छ । अहिलेलाई छा`ङ्गरुमा सश`स्त्र प्रहरी निरीक्ष`कको नेतृत्व`मा २५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाउने तयारी भएको विष्टको भनाइ छ । स`शस्त्र प्रहरी पठाउनुपर्छ भन्दै पटक`पटक जिल्लाबाट रिपो`र्टिङ हुँदै आएको थियो । व्यासको छा`ङ्गरु गागामा सशस्त्र प्रह`रीको बि`ओ`पी रा`ख्न स्थानीय वासीले जमीन समेत उपल`ब्ध गराएका छन् ।
स्थानीय`वासीले गागामा कित्ता नं ३५ को ११५ रोपनी तीन आना जग्गा मध्ये १५ रोपनी जमीन सश`स्त्र प्रहरीलाई दिइ सकेको छ । बि`ओ`पी स्थापना हुने भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ५० नं गुल्म दार्चुलाबाट गत चैत पहिलो साता निरी`क्षण समेत गरिएको थियो । सश`स्त्र प्रहरीको हेड`क्वार्टर मार्फत गृहमा व्यासमा सश`स्त्र प्रहरी पठाउने स्वी`कृतका लागि पत्र गइ`सकेको सुर`क्षा अधिकारीले जनाएका छन् ।
भारतले नेपाली भूमि भएर सडक निर्माणप`छि सीमामा राज्यको उपस्थिति गराउनु`पर्ने दबा`ब परेको थियो । अहिले नै भवन निर्माण गर्न सकिने अव`स्था नभए पनि घर भाडामा लिएर सशस्त्र प्रहरी राख्ने तयारी भएको हो । अहिले हिमपात पनि कम हुँदै गएका कारण सशस्त्र प्रहरी बस्न सक्ने अवस्था रहेको वि`ष्टको भनाइ छ । यसअघि व्यासको तिङ्क`रको छायालेक र छा`गङ्रुको सीता`पुलमा रहँदै आएका नेपाल प्रहरी`का दुवै युनिट अहिले व्यास गाउँ`पालिका–२ को दुम्लिङ झरेको छ ।